Sumal Baraar Kumo Jiro-e Siilaanyo Waa Madax! | Somalidiasporanews.Com
Sumal Baraar Kumo Jiro-e Siilaanyo Waa Madax!
February 21, 2013 | Filed under: Features | Posted by: Webmaster Alla Magane waa koox
Kasmo iyo aqoon iyo
xirfad lagu kalacayoo
Kabtan adagi laylshoo
Inta loo kitaab furay
Kaaf iyo Wa-tiin iyo
Yaasiin Ku Kaariman!
Meeshu waa Djibouti iyo habeen la xusayay 40 guuradii qoristii farta Soomaaliga ee 1972-kii hirgashay! Dad ka kala yimid degelada Soomaalida afkeeda la xusayaa degto oo la soo marti qaaday oo jaad kasta oo bulshadu ka kooban tahayba leh ayaa madasha fadhiya. Waxa raga golaha dooyaysatay ka mid ah, oo ah waliba ninka ugu tunka wayn leh marka dhan kasta laga eego, haday tahay Aqoon, waayo-aragnimo, cod-karnimo, magac, maamuus, milgo iwm, madaxwaynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamad Maxamuud ”Siilaanyo”!!!. Furistii xaflada ka dib, hadalkii la bilow oo dadkii loogu talo-galay inay wax ka yidhaahdaa dhacdadani miramirayste makarafoonka! In door ah dabadeed, isku tuba-ridahii qaybinayay hadalka ee magacyada dadka naadinayay ayaa ku lalabay, in markani yahay markii uu hadalka u baxi lahaa, ninkii ay dadku goorahanba sugayeen ee la wada naawilayay, waa mudane Axmed Maxamad Maxamuud ”Siilaanyo!
Sacab iyo yuhuun gobeed lagu qaabil, qof kasta oo golaha fadhiyayna (mijo iyo madax) sidii arday macalinkoodii Fasalka u soo galay foojignaan iyo u fiirsasho buuxda dhegaha u furay! Alla magane, Mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo-na, waxii laga filayay iyo dheeraadba goobtaa iyo Goortaa ku maashee. Hanka iyo isku kalsoonida qofeed ee karkaarada jabsatay ka sokow, gole jooga iyo biliga uu la soo kacay ee uu la soo shir yimid ayaa ashqaraar ku wada riday daawadayaashii! Inuu yahay nin ay umad idili dooratay oo xil qaran oo u qalmo sidda cidina isma waydiinayn. Qof kasta oo meeshaa fadhiyayba kol ay ku tahay labada madaxwayane (djibouti/Somalia), wax ka duwan oo aan markaa cid kale ka muuqan ayaa ka widhwidhayay oo gibilka mudane madaxwayne Axmed Maxamad Maxamuud ”Siilaanyo” saarnaa, taas oo ahayd magac dheg-samaan ku da’ tirsaday oo in wayn jiray, oo ugu yaraan 50-kii gu’ ee u dambeeyay sooyaaalka gayiga geeeska Afrika barriisaday. CV-giisa ayaa kaaga filan oo ay ugu taalaa sidani, dhaqaale-yahan, Siyaasi, Mujaahid, Aqoonyahan, gudoomiye xisbi-mucaarid, Maaxwaynaha qaranka Somaliland iwm.
Hankii dadku u qabay iyo soo jireen-nimadiisii hungo ma noqon ee saluug la’i ayuu waxii laga rabay bojiyay! Oo Laba eray oo af-soomaaliga ku jira (qorshe iyo jaan-goyn) oo kali ah oo uu goobtaa dadka uu ugu sharaxay qaabkii ay ku yimaadeen iyo waliba, sida ay adeegsi ahaan u dhaqan